Kuphi ukubukela umdlalo ngexesha le-2021-2022? | Iindaba zeGajethi
UDiego Lopez | 09/09/2021 14:53 | ngokubanzi
NgoSeptemba kuyafana nokubuyela esiqhelweni, nkqu nakwezemidlalo. Ukhuphiswano lwezemidlalo luhlala luqala ixesha lazo elihambelanayo okanye luqhubeke nalo. Ke ngoko awuphoswa nayiphina, ukusuka Iindaba zeGajethi siza kukuxelela apho ungabona khona ukhuphiswano lwezemidlalo oluphambili kwixesha lonyaka ka-2021/22.
Ngokwesiqhelo uqala ukubukela ibhola kwiiveki ezimbini zokugqibela zika-Agasti. Kubekho kuphela into eyodwa eyenze ukuba ihambele kumhla kwikhalenda kwaye ibingunyaka ophelileyo nge-COVID. Eli xesha lonyaka lisenentsalela yesifo kodwa kubuncinane. Indaleko elungileyo iya kuvumela ukubuyela koluntu ebaleni, nangona ewe, okwangoku, ngomthamo olinganiselweyo.
Ke ukuba ungomnye wabo bangenayo ukuthenga itikiti, ungaphumla lula kuba uya kuqhubeka unokhetho lokubukela iLaLiga kumabonwakude ngazo zonke ezi ntlawulo sixelelwa ngazo Roams. Kulo nyaka umlinganiso wonyaka ophelileyo uyaphindwa. IMovistar kunye neorenji kuphela kwabasebenza apho unokubukela ibhola ngokusebenzisa iipakethi zabo eziguqukayo, i-Fusion kunye ne-Love rates, ngokulandelanayo.
Kwimeko ibasketballKuya kuxhomekeka kwinqanaba lokhuphiswano. Ukuba yi Ukhuphiswano lwaseYurophu njenge-Euroleague, i-Basketball Champions League okanye i-Eurocup, uyabona nge-DAZN; ngelixa i-Endesa League, eMovistar, ngubani onamalungelo osasazo obu buntshatsheli.
Kuthekani ngeminye imidlalo?
Kwimoto, ukhuphiswano lwendlovukazi ziFomula 1 kunye neMotoGP. Nangona obu buntshatsheli bunezinyanga nje ezimbalwa ukuba bufike, usenokuthatha ithuba lokugqibela. Ngapha koko, ukuba uyikhwela ngokuchanekileyo, unga bona isiqingatha sentsalela yexesha simahla ngokupheleleyo. Isizathu kukuba i-DAZN yafumana amalungelo osasazo kude kube ngu-2022 kwaye inethuba lokulingwa simahla kwinyanga enye. Kwaye, kuxhomekeke kwinto oyithandayo, unethuba lokubhalisela kwiqonga ngenyanga okanye ngonyaka.
Kwakhona, UMovistar wafikelela kwisivumelwano ne-DAZN, ukuze ubone umxholo wenjini ngokusebenzisa i-blue operator. Ifakiwe kwiphakheji ye-Motor TV, ebandakanyiweyo kwixabiso kumanqanaba amabini e-Fusion (Fusion Plus kunye ne-Fusion Total Plus 4 imigca). Kwezinye iirhafu zeFusion, kuya kufuneka uhlawule iindleko zephakeji ephezulu.
Ukuhamba ngebhayisikile okwangoku kugcwele ngokupheleleyo kunye ne-European Championship kwisixeko sase-Italiya iTrento. Ke ukuba ungumthandi walo mdlalo, Ungabukela yonke imidyarho yeebhayisikile kwiDAZN. Iqonga lineendlela ezimbini ze-Eurosport (i-Eurosport 1 kunye ne-Eurosport 2), enamalungelo osasazo kuyo yonke ibhayisekile. Ngapha koko, Ijelo le-Eurosport 1 likwinkampani ezinje ngeOrange, iVodafone okanye iVirgin Telco.
Kukho ukwenzeka jonga ukukhwela ibhayisikile nabaqhubi abanjengo Yoigo, Movistar, Guuk okanye MásMóvil. Kule meko, nge-DAZN, ebandakanyiweyo kwezinye iirhafu zayo ngokuthe ngqo kwixabiso nakwezinye, iindleko eziphezulu ziya kuhlawulwa.
Ngentenetya kuyafana nokuhamba ngebhayisikile. Ewe kunjalo, kuxhomekeke kukhuphiswano uya kuba nalo kwindawo enye okanye kwenye. Ezintathu kwezine zeGrand Slam (iRoland Garros, iUS evulekileyo kunye neOstreliya evulekileyo) zibonwa kwiEurosport 1, ziyafumaneka kubaqhubi abanjengoYoigo, MásMóvil, Gukk, Movistar, Orange, Vodafone okanye Virgin Telco nakwiDAZN. Ngokwenxalenye yayo, iWimbledon eMovistar, ethe yathenga amalungelo okumamela. Ukusuka kwiitumente ezisezantsi ezinje nge-Master 1000, 500 kunye ne-250, amadoda abonwa eMovistar kunye nabafazi base-DAZN.
Imidlalo mininzi kunye neendlela zokuyibona. Ngoku kufuneka ukhethe umdlalo owuthanda kakhulu kwaye uyonwabele ngexesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Kuphi ukubukela umdlalo ngeli xesha lonyaka?
I-iPhone 13 nayo yonke into i-Apple eyibonisileyo kwi-Keynote yayo